Lany nasiam-panitsiana ny tetibola 2022: hiakatra ny karama, marobe ireo mpiasam-panjakana horaisina | NewsMada
Lany nasiam-panitsiana ny tetibola 2022: hiakatra ny karama, marobe ireo mpiasam-panjakana horaisina
Nolanin’ireo depiote, saingy nasiam-panitsiana ny volavolan’ny tetibola ho an’ny taona 2022. Misongadina amin’izany ny lafiny sosialim-bahoaka sy ny fotodrafitrasa ary ny fiakaran’ny hetra amin’ireo rendrarendra sasany.
Tafiditra ao anatin’ny tetibola (LFI – 2022) ny fampidirana mpiasam-panjakana maherin’ny 20 000. Hitsinjara amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, ny Fanabeazam-pirenena, ny eo anivon’ny tafika sy ny zandary izany. Anisan’ny handray mpiasam-panjakana koa ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana, ny Fampianarana teknika ary ny fanofanana arakasa. Hanampy ireo ny horaisina eny anivon’ny Andrimpanjakana samihafa.
Etsy an-daniny, nampitomboina hatrany amin’ny 27% ny tetibola ho an’ny karaman’ny mpiasam-panjakana. Hitohy amin’ny fanondrotana ny karama izany amin’io taona ho avy io. Haloa avy hatrany koa ny fisotroan-dronono 12 volana ho an’ireo tokony hisitraka izany.
Tsy mijanona eo fa hiroso hatrany koa ny fanorenana fotodrafitrasa ho an’ny fanabeazana, toy ny sekoly sy ny ho an’ny fahasalamana, toy ny toeram-pitsaboana…
Hiaka-bidy ny sigara sy ny toaka…
Ankoatra izany, nampiakarina hatrany amin’ny 15% ny tataon-ketra amin’ny toaka sy ny sigara ary ny paraky. Mety hiaka-bidy izany ireo ho an’ny mpifoka na mihinana izany, amin’ny taona 2022.
Na izany aza, nafana ny adihevitra sy ny nirosoana amin’ny fanitsiana izany tetibola izany. Nitaky ny hamerenana ho 10% ny haba alain’ny fadin-tseranana amin’ny fidiran’ny akora fanaovana savony “Bodillon” ireo depiote raha 20% izany. Natao hanomezana vahana ny vokatra savony eto an-toerana anefa ny nampiakarana izany, raha ho an’ny eo anivon’ny minisiteran’ny Tetibola.
Mbola handalo eny amin’ny Antenimierandoholona izany volavolan’ny tetibola izany, aorian’ny teny amin’ny Antenimierampirenena.